काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच भएको सहमतिमा प्रश्न उठाएका छन्। दुई वर्षसम्म भूमिगत रहेको विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग सरकारले हतियार बुझाउने विषयमा सहमति नभएको प्रति प्रश्न उठाएको हुन्।
यद्यपि उनले सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच समझदारी भएको विषयलाई स्वागत गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा शर्माले लेखेका छन्, ‘ ‘प्रचण्ड आउँदा खोलाले बगायो थोरै हतियार, विप्लव आउँदा पुरै ? राज्यलाई हतियार बुझाउने चौथो बुँदा खोइ ? सिङ्गो देश चाहन्छ यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ।’
शर्माले नेपालमा कम्युनिस्टहरूको आन्दोलनका लागि नेपाली जनताले पटक पटक ज्यान गुमाउनुपरेको सम्झाउँदै कम्युनिस्ट दर्शनका नाममा कोही नेपाली मारिने छैनन् भन्ने साझा उद्घोष गर्ने वेला भए-नभएकोबारे प्रश्न गरेका छन्।
‘नेपालको पुरै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई आजको मितिमा केवल एक प्रश्न, ‘०२८ मा केपी-सिपी, ०५२ मा प्रचण्ड-बाबुराम, अहिले विप्लव-प्रकाण्ड, सबैको नाम र काम उस्तै, परिणाम उस्तै। कम्युनिस्ट दर्शनका नाममा कोही नेपाली अब मारिने छैनन् भनेर साझा उद्घोष गर्ने वेला भएन कमरेडहरू ?,’ शर्माले भनेका छन्।